Downloads 47 061
Mpanoratra: Cyril, Frank Safranek, Pierre Marchadier, Sharky, Antoine Osmond, Mevel Nicolas
Misy amin'ny 3 fihetsiketsehana repaints: Marine, fihetsiketsehana sy ny pifandraisan. Feo no tsara indrindra izany. Noho ny mpanoratra ho amin'ny asa tsara.
Ny Dassault Rafale dia fiaramanidina miaramila frantsay omnirole mivoatra ary novokarin'ny frantsay mpanamboatra Dassault Aviation. An'ny ny taranaka fantatra amin'ny hoe "4 + +" mpiady fiaramanidina, dia ny vokatry ny fandaharana nitarika tany amin'ny tapaky ny 1980s, penitra ny frantsay tafika, izay mikendry ny hisolo ny 2025-2030 Ny fito karazana fiaramanidina eo amin'ny fanompoana mandra-Air Force sy ny tafika an-dranomasina. Ny Rafale ary tsy maintsy vita ny asa fitoriana voatendry teo aloha ireo fitaovana, anisan'izany ny mety hisian'ny fitokonana ny nokleary.
Ny Rafale dia fiaramanidina mpiady amin'ny vinanihefaka elatry canard akaiky, Powered by roa Snecma M88 afterburning turbojets sy ny herinaratra fiaramanidina fanaraha-maso izay mamela anareo harahina azo tarehimarika tamin'ny fiaramanidina tena nifaninana tamin'ny entana antony mahatratra 10 h nandritra ny famelabelarana ALPHA. Ohatra, ny Eurofighter Nanandrana nahomby tafatontona teo amin'ny rollover. Ny Rafale tsy ampy amin'ny dikan-telo: ny Rafale M, seza fiaramanidina ho an'ny asa avy amin'ny fiaramanidina mitondra, ary ny Rafale B sy C Rafale, tsirairay avy seater sy roa-seater fiaramanidina ho an'ny asa natao avy amin'ny tany fototra. Ny Rafale dia afaka mahatratra ny hafainganam-pandeha ambony indrindra ny 2203 km / h (mạch 1.8), ary ny ambony indrindra afaka ny 9500 payload kg. Ny particularity dia ny niara-manao asa fitoriana maro amin'ny mombamomba samy hafa be, noho izany ny teny hoe fiaramanidina "omnirole."
Dia nirahina tamin'ny May 18 2001 sy 31 Desambra 2011, 105 dika mitovy ny Rafale miaramila frantsay hampitaovana ny 286 nandidy ny fanjakana frantsay. Natolotra ho an'ny fanondranana ny firenena maro (Emirà Arabo Mitambatra, Brezila, India, sns ..), ny Rafale hatramin'izao dia tsy nahazo didy mafy. Na izany aza, Dassault Aviation efa niditra tao manokana fifampiraharahana tamin'ny Febroary 2012 for 126 fiaramanidina ho an'ny tafika Indiana ho fitambarany $ lavitrisa 12 mahatonga izany ny lehibe indrindra hatramin'izay fanondranana fifanarahana nahazo ny fitaovam-piadiana ao Frantsa.
Ny Rafale dia mifanaraka amin'ny fiaramanidina mpitondra amin'ny lampihazo, mifototra amin'ny simulations ny Dassault Aviation. (Wikipedia)